GNOME Inogadzirisa Yayo Mhosva neRothschild Patent Kufungidzira | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzakanaka dzeakavhurika sosi: GNOME inogadzirisa gakava rayo neRothschild Patent Imaging
Svondo yapfuura, iyo hwaro GNOME akaendeswa kudare neye patent troll inonzi Rothschild Patent Imaging. Chichemo chekambani yaive neiyo patent yacho chaisagona kuve chisina musoro: pakati pezvipomero zvaro zvakati ivo vane kodzero yekutumira mifananidzo pasina tambo, saka yaifanirawo kushora mamwe makambani makuru akadai seApple kana Google, asi haana kuzoshinga, pamwe nekuda kwekukosha kwavo. Nezuro, tenda Mwari, zvese izvi zvakave chikamu chekare.
Kunge yakashuma GNOME pane yayo yepamutemo webhusaiti, mapato maviri asvika chibvumirano. Naizvozvo, GNOME inogona kuenderera nebasa rayo Shotwell, mudzi wekupokana, uye mamwe mapurojekiti uye anovimbisa kuti haizopomedzerwa neRothchild Patent Imaging, kana ikozvino kana mune ramangwana, kana icho chiri icho chinangwa. Uye chikamu chakanakisa, ivo vachakwanisa kuenderera vachichiita sezvavakaita kusvikira zvino, ndiko kuti, kugadzira uye kuvhura yavo software se Open Source. Muchokwadi, iyo patent troll haizomhan'arira chero munhu anoshandisa patent yake pane yakavhurwa sosi software, iyo inogona kunzi kukunda kukuru.
GNOME inogona kuenderera ichishanda pane Open Source
Muchibvumirano ichi, GNOME inogamuchira kuburitswa uye chibvumirano chekusakwidzwa kumatare epamutemo akachengetedzwa neRothschild Patent Imaging. Pamusoro pezvo, vese Rothschild Patent Imaging naLeigh Rothschild vari kupa vhezheni uye chibvumirano kune chero software iyo inoburitswa pasi peiyo iripo Open Source Initiative mvumo yakatenderwa (uye nedzimwe shanduro dzayo), kusanganisira iyo yose Rothschild patent portfolio, maererano nezvakataurwa software icho chikamu chemukati chekupomerwa kwekutyorwa.
Ini pachangu, ndinofunga kuti hechino chinhu chingaverengerwe pakati pemitsara: kuti vataura kuti vari kuzobvumira yavo "patents" kuti ishandiswe (ngatiisei mumakotesheni, nekuti ehe) mapurojekiti anoshanda paOpen Kwayedza software zvakare zvinoreva kuti ivo havana kutaura chinhu nezvenyaya dzacho software yacho ndeyekuchengetedza, kana chii chakafanana, vangave vachida kumhan'arira mamwe makambani nekuda kwechikonzero ichocho vakamhan'arira GNOME. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kufunga kuti ivo havana chekuita uye vakasarudza kusvika chibvumirano, vachisiya nemiswe yavo pakati pemakumbo avo.
Kuva patent troll, tinogona kuva nechokwadi chekuti vachadzokera kumutoro. Uye, ndichifunga mamwe emapoinzi akaverengerwa mudare, ini ndinongovimba kuti nguva inotevera pavanofunga kumhan'ara, iGoogle kana Apple. Ndinofunga tichaseka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nhau dzakanaka dzeakavhurika sosi: GNOME inogadzirisa gakava rayo neRothschild Patent Imaging
Windows, iyo yakanakisa kugoverwa kweLinux kwe2020 nekuda kweWSL 2